Real Madrid oo guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Valencia garoonka Alfredo Di Stefano… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye June 18, 2020
(Madrid) 19 Juun 2020. Real Madrid ayaa guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Valencia garoonka Alfredo Di Stefano, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah ay isku dhaafi waayee labada kooxood Real Madrid iyo Valencia.
Daqiiqadii 61-aad kooxda Real Madrid ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, kaddib markii uu 1-0 ka dhigay weeraryahanka reer France ee Karim Benzema, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Eden Hazard.
Markale daqiiqadii 74-aad Real Madrid ayaa la timid gool labaad, waxaana dheesha 2-0 ka digay Marco Asensio oo badal ku yimid isla markaana taabashadiisii ugu horeysay gool cajiib ah dhaliyay, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Ferland Mendy.
Daqiiqadii 87-aad Real Madrid ayaa sii dheereysatay hoggaaminta ciyaarta waxaana 3-0 ka dhigay Karim Benzema oo si qurux badan gool ugu badalay kubad uu ka soo shaqeeyay Marco Asensio .
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-0 ay kaga adkaatay Real Madrid kooxda Valencia oo marti ugu aheyd garoonka Alfredo Di Stefano.
Jürgen Klopp oo ka hadlay xaalada dhaawacyo ee kooxda Liverpool, kahor kulanka Everton